Ceebtii Yeman, Dhoofkii Keenay Dhimashada Puntland ee Ina Dhuubo iyo Ina Maryama Agan – Rasaasa News
Nov 11, 2009 Eritrea, ONLF
Marxuun Cabdulahi Xasan Cali Eebow kuu naxariiso, inta gacanta cadowga ku jirtan ka sii daa, Ina Maryama Agan iyo Ina Dhuubo ayaa ka dambeeyey dhimashadiisa iyo xadhiga dhalinyarada, baadhid dheer oo aanu samaynay ayaanu ku ogaanay sida ay wax u dhaceen.
Faysal caruurutiisa iyo xaaskiisu waxay degan yihiin, guri weyn oo ku yaal dalka Finland, waxay haystaan waxbarasho, caafimaad iyo nolol wanaagsan, noloshaas waxaa si bilaash ah looga bixiya canshuurta ka timaada shaqaalaha dalka Finland, maadaama uusan isagu lahayn aqoon gaadhsiisa in uu kaga shaqaysto dalka Finland, wuxuu door biday nolol ay naftiisu ku qanacsan tahay oo ah in Qaaraan been lagu uruuriyey uu ku goosto tigidh diyaaradeed.
Cadaani, waxaa uu qaxooti ku ahaa dalka Denmark muddo toban sano ah, kolkii uu ku kashifmay nolosha Denmarka, waxaa bishii hore u tahriibay isaga oo cimri ah dalka Australi, wax kalena ma ah ee waxaa uu nolol u raadinayaa naftiisa oo kaliya.
Hadaba, ma xaq baa in dhalinyaro reer miyi ah oo ay wada dhasheen aaminsana in uu yahay wax dheer yahay iyaga in uu si xeeladaysan uu u jeclaysto in uu ka ganacsado dhiigooda, si uu uga dhigto war, ayuu ka shaqeeyo dhimashadooda kana dhoofiyey dalka Yeman magaalada Sanca, alaylehe waa arin xun oo tiiraanyo leh.
Jwxo-shiil, waxaa sideedtan jir wax ka soo burburiyey xukuumadii ugu dambaysay ee Somaliya, waxaa uu wax ka burburiyey ururka ONLF, waxaan jirin garasho laga sugo, dhibaato mooyee, ma aha nin u ogol kooxdiisa talo iska daayo xitaa in ay ka hadlaan ideecadaha, wax walba isaga ayaa gacanta ugu haya. Jwxo-shiil, waxaa u socon waayey niddamyadii ay dadka reer Ogadeeniya ugu afduubnaayeen, waayo waxay ogaadeen in uu yahay gacan ku dhiigle dambiyo badan galay.
Jwxo-shiil waxaa uu alifay, sheeko laggaga sii jeedsado khaladaadkiisa iyo dambiyada uu galay, taas oo dhibaato ka dhex abuurta umada Somalida Ogadeeniya iyo maamul gabaleedka Puntland, maamulkaas oo ah maamulkii ugu dambeeyey ee xidhiidh wanaagsan la lahaa ummada Somalida Ogaden, waxaanu uu abaabulay Jwxoshiil sidan.
Waxaa Bishii October 2009 bilowgeedii yimid Magaalada Sanca ee dalka Yeman, nin Lagu magacaabo Ina Maryama Agan oo haysta dhalashada wadanka Finland, ninkaas oo sheegtay kolkii uu yimid dalka Yeman in uu yahay dadka ugu sareeya maamulka Garabka kooxda Jwxo-shiil. waxaa loo diray in uu abuuro dhibaato keenta in uu Jwxo-shiil kaga baxo cidhiidhiga uu ku jiro iyo dhexgal la,aanta ummada Somalida Ogadeeniya.
Dalka Yeman waxaa si xoog leh u jooga dad badan oo ka tirsanaan jiray ururka ONLF, halkaasna ku tagay doomo tahriib ah, laakiin ku banjarmay markii dambe, badankoodu waxay ku jiraan xerada Qaxootiga ee loo yaqaan Jaxiima. Waxaa kale oo halkaas ka jirta Jaaliyad balaadhan oo si xoog leh uga soo horjeeda Jwxo-shiil, Jaaliyadaas oo aaminsan in uu yahay ninka masuulka ka ah burburka ururka ONLF, waxaa kale oo iyana jira dad yar oo taageersan Jwxo-shiil, kuwaas oo kaliya ku taageera qabiil [qabiil ku jabhada].
Hadab, ninkaas waxaa uu u yimid dalka Yeman in uu ka shukaansado dad, dibna ugu celiyo rag hore masuuliyiin uga ahaa ururka ahaan jiray ururka ONLF gudaha Ogadeeniya. Wuxuuna damcay inta uusan wax kale samaynin in uu xaliyo khilaaf aadka u xoog badan oo u dhexyaal labada Jaaliyadood ee degan dalka Yeman, kuwaas oo kala taageera labada garab ee ururka ONLF.
Kolkuu yimid Ina Maryama Agan bulsha waynta reer Ogadeeniya ee ku nool wadanka Yeman, si diiran ayay u soo dhaweeyeen, waxayna moodayeen in uu yahay nin ka warhaya ama danaynaya dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil u gaystay halganka, waxaase cadaatay in uu yahay dadka wali u indha xidhan. Waxaana uu isla markiiba guda galay wax uu ugu yeedhay Xalin khilaaf oo jaaliyada dhextiil, waxaana uu markii Kowaad la kulmay gabdhiho ONLF ahaan jiray, si fiican ayuu kulankaasi u dhacay waayo wuxuu u sheegay been ah in dhoof loo daydayayo.
Waxaa xigay in uu la kulmay garab mid jaaliyada oo rag ahaa, hase yeeshee, waxay arintu gaadhay kala qabasho ka dhacaday goobta, ka dibna garabkii labaad oo rag ahayd ayuu
la kulmay, jawiguna wuu deganaa in kasta oo kala fogaansho xaga Firka ahaa uu jiray.
Ina Maryama Agan, waxaa uu shirsaday niman dhalinyaro ah, waxaana dhalinyaradaas telephone kula soo hadlay Ina dhuubo, wuuna u u tolimo sheegtay, wuxuu u sheegay in la dhoofin doona lacag xoog lehna ay Galkacyo taal oo iyaga loogu talo galay. Wuxuu sheegay in lacag xoog leh iyo hub casri ahba ay bixisay xukuumada Eritrea iyo dalka Qadar, loona baahan yahay rag tol ah oo sameeya abaabul ciidankii ONLF.
Ina Maryama Agan waxaa uu laba todobaad, ku dhex wareegayey xerada Jaxiima iyo Sanca, waxaa kale oo uu waqadaha dhoofka uga qaaday safiirka Somaliya u fadhiya dalka Yeman shan wiil oo si xigto ah uu cadaani ula hadlay. Waxaa kale oo iyana la diyaariyey in ay ka daba baxaan kuwaas 15 wiil oo kale oo sidaas si la mid ah balan qaad loogu sameeyey, ragaas oo kaliya u baahan lacag, waayo waxa keenay Jaxiima waa dhibaato.
Hadaba, waxaa yaab leh in dad aan iyaguba gali karin wadnka hal habeen kaliya, oo aan ka warhaynin waxa ka socda geeska Afrika iyaga laftigooduna qaxooti hor leh ka doondoonaya dalalka reer galbeedka in ay hawiraan dhimasho dad ay wada dhasheen.
Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Yeman, waxay u haystaan dhimashada iyo xadhiga wiilsha in ay ka dambeeyaan Ina dhuubo iyo Ina Maryama Agan, ayna ahayd arin uu ka dambeeyey Jwxo-shiil, si uu u helo fursad uu kaga hadlo Ideecadaha, sadex ka mid ah wiilsha la qabqabtay waa reer dhanaan labana waa reer garbo. Ina ay arintaasi run tahay waxaad ku xaqiiqsan tirada ONLF ee sanadkii 2008 laga qabqabtay Punlan waxay dhamayd 12 ruux oo sadex ka mid ah ay ahaayeen masuuliyiinta ugu saraysay ururka ONLF, hadalkooduna waxaa uu socday kaliya laba todobaad, maantase waad arkaysaan waxa ay samaysanayo kooxda Jwxo-shiil.
Waxaan qabaa wiilasha loo dhiibay Itobiya in ayna arkaynin wax dhibaato ah, waayo wax jiray kuwo badan oo hore loogu dhiibay eeggana iska jooga dhulkooda, Dhiire Caafe iyo Sooyaan Jijiga ayey iska joogaan waxayna ahaayeen xubno golo dhexe ah.